Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone si Mac Mac & ka si iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone si Mac Mac iyo in iPhone
Maqaalkani waxa uu diiradda ku xal loogu sida loo ka iPhone wareejiyo music inay Mac iyo sida loo heeso daro si iPhone ka Mac. Haddii aad qabtid wax dhibaato ah kala wareejinta music dhexeeya iPhone iyo Mac, helaan xal hoose. Haddii aadan aqoon aad waxa la sameeyo, fadlan nala fariin ka tagto goobta comment ah. Thanks. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 3 qaybood:
Qaybta 1. Transfer Music ka iPhone si Mac
Xalka 1. Lugood ma Copy karaa Songs Non-iibsaday ka iPhone si Mac, Isku day TunesGo si ay u gudbiyaan All Music ka iPhone si Mac
Xalka 2. Sidee si ay u gudbiyaan Music iibsaday ka iPhone si Mac
Qaybta 2. Transfer Music ka Mac si iPhone
Xalka 3. Sida loo dar Music inay iPhone aan Lugood on Mac
Xalka 4. Sida loo hagaagsan Music ka Mac si iPhone la Lugood
Xalka 5. SIDEE LOO ka Mac dir Music inay iPhone via Services Cloud
Qaybta 3. Su'aalo iyo Jawaabo
Su'aalaha Q & A. iyo Jawaabo u beddelashada Music dhexeeya iPhone iyo Mac
Video Tutorial: Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPhone si Mac Mac iyo in iPhone
Xalka 1. Transfer Non-iibsaday music ka iPhone si Mac
Waxaad aan ku xirnaan karaan Lugood si ay u gudbiyaan aan iibsaday music, heeso ay ka mid yihiin wada dooxay ka CD-yada, bixi via app ama ka websites on iPhone, ka iPhone si Mac, maxaa yeelay Lugood marnaba kuu oggolaanayaa in aad samayn in. Lugood ma Copy karaa Songs Non-iibsaday ka iPhone si Mac. Haddii aad raadinaya hab ka kaaftoomi lacag la'aan ah si ay u gudbiyaan kuwa heesaha oo dhan oo aan ku iibsaday ama wax song ka iPhone si Mac, waxaad isku daydaa inaad qalab ay sameeyaan in. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida loo hagaagsan music ka iPhone si Mac la Wondershare TunesGo (Mac) . Waxaad ku dayi kartaa si aad u aragto sida ay u shaqayso.
Tallaabada 1. Disable Lugood Auto nidaameed
Wax First hore, abuurtaan Lugood iyo guji Lugood ee ugu sareeya ka tagay> rabtid ... In uu furmo suuqa ku kaliftay, riix Qalabka tab. Ka dibna hubi ikhtiyaarka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah . Taas ka dib, aad iPhone aan laga tirtirayaa by Lugood.
Tallaabada 2. Ku rakib Wondershare TunesGo (Mac)
Ka hor inta aadan bilaabin music dayanayaan ka iPhone si Mac, download iyo rakibi Wondershare TunesGo (Mac) on your Mac hore. Waxaa si buuxda la jaan qaada Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6. Ka dibna waxa lagu daahfuri iyo xiriiriyaan iPhone aad Mac via cable USB ah. Ka dib markii isku xidha, aad arki doonaa Wondershare TunesGo (Mac) u eg waxa ka muuqda si dhekhso ah.
Tallaabada 3. Transfer music ka iPhone si Mac
Dad badan ayaa isku dayaysa inay u hagaagsan music ka iPhone si Mac. Waxaa jirta. Si kastaba ha ahaatee, gabayadii wareejiyo waxay ku kooban Lugood ama Apple APP Store iibsaday heeso. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka loogu sida ay u gudbiyaan Lugood iibsaday heeso ka iPhone si Mac
Tallaabada 1. Dami Lugood Auto nidaameed
Burcad Lugood iyo guji Lugood menu xaq ag icon Apple yar ee ka jaray. Riix aad rabtid . In uu furmo suuqa cusub, guji Devices . Markaas sax ikhtiyaarka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah .
Tallaabada 2. ogolaato Your Mac la ID Apple
Riix Store menu in Lugood iyo dooran ogolaato Computer Tani . Ku qor ID isla Apple oo aad loo isticmaalaa in lagu soo gato heeso aad iPhone ee degdeg ah suuqa kala.
Tallaabada 3. Transfer Music iibsaday iPhone in Lugood
Connect aad iPhone aad Mac. Ka dibna riix View> Show galeeysid . Ka dib marka aad aragto iPhone, gacanta u riix si aad u muujin liiska hoos-hoos. Laga soo bilaabo liiska, dooran Iibsasho Transfer .
Ka iPhone Bedelka Music inay Mac (Tallaabo 1) Music Transfer ka iPhone si Mac (Tallaabada 2) Music Transfer ka iPhone si Mac (Tallaabada 3)
Haddii uu jiro digniin kuu sheegaysa in iPhone laga tirtirayaa doonaa halka aad isku dayayaan in ay u hagaagsan music ka Lugood si iPhone on Mac, fadlan joojiya habka syncing isla markiiba oo isku day Wondershare TunesGo (Mac) , kaas oo kaa caawinaysaa in aad music ka Mac wareejiyo iPhone aan Lugood. Hoos waxaa ku qoran tilmaan tallaabo-tallaabo ah oo sida loo sameeyo.
Wondershare TunesGo (Mac) - Music Transfer si iPhone aan syncing Lugood on Mac
Si toos ah dhoofsadaan music ka Mac si iPhone aan syncing Lugood,
Bedelka wax song ka Mac kasta si iPhone kasta oo aan isagoo tirtira iPhone;
No dhibaatooyin incompatibility kici doonaa; Fiiri qaabab file taageeray >>
Taageer iPhone badan, oo ay ku jiraan 6s iPhone (Plus), iPhone 6, iPhone 5, iyo in ka badan >>
Tallaabada 1. Disable Lugood Automatic syncing
On aad Mac, ordo Lugood. Riix Lugood taas oo dhinaca midig ee icon Apple bidixdiisa aad u sareysa. Dooro aad rabtid. In uu furmo suuqa, ka heli guji tuubada Devices. Markaas eeg "Ka hortag iPod, iPhone, iPad iyo ka syncing si toos ah".
Tallaabada 2. Download Wondershare TunesGo (Mac)
Download iyo rakibi Wondershare TunesGo (Mac). Waxaa si fiican u la shaqeysaa iMac, MacBook Pro oo MacBook socda ee OS X 10.8, 10.9 (Mavericks) Air, 10.7, iyo 10.6. Connect aad iPhone aad Mac dhex cable USB ah. Burcad Wondershare TuensGo (Mac), waxaad arki doonaa suuqa kala muhiimsan ee sida show si dhekhso ah dhanka midig.
Tallaabada 3. Download Music ka Mac si iPhone aan Lugood
Riix Music dhinaca bidix ee suuqa si ay u soo galaan suuqa kala gacanta. Laga soo bilaabo halkan, waxaad ka arki kartaa heesaha oo dhan aad iPhone ku qoran yihiin. Riix saddexagalka ee hoos ku Add button dusheeda. In liiska hoos-hoos u, dooro dar File ama dar Folder . Ka dib markaas, daaqad aad u horseedi doonaa in aad Mac dhirta ee heesaha ama ururinta music folder. Dooro mid aad u baahan tihiin oo guji Open in aad nuqulka music ka Mac si iPhone.
Haddii aad iPhone ayaa wajihi doonta aad Mac, waxaad isticmaali kartaa Lugood aad Mac si hagaagsan heeso aad iPhone si xor ah. Xogta ku saabsan iPhone ma waayi doono. Si aad u isticmaasho Lugood inuu u dhaqaaqo heeso ka Mac si iPhone, cusboonaynta Lugood si aad u version ugu dambeeyay ee hore. Waxaad kartaa download version ugu danbeeyay ee goobta rasmiga ah ee Apple. Raac tallaabooyinka hoose si aad u barato sida.
Burcad Lugood aad Mac. Riix Lugood File menu in xadhiga ka dooro dar File inay Library heeso dari ka drive adag maxalliga ah si ay Lugood Library.
Guji ku View menu in Lugood dooro Show galeeysid . Connect aad iPhone aad Mac via cable USB ah. Marka xiran, waxaad arki kartaa iPhone hoos AALADAHA .
Riix si aad iPhone galeeysid ah. Riix Music tab ee dhanka midig. Hubi nidaameed Music . Next, waa in aad xulan heeso iyo Riix codso inuu u dhaqaaqo heeso ka Mac si iPhone.
Ka sokow isticmaalaya Lugood iyo qalab dhinac saddexaad ku darto music ka Mac si iPhone, weli waxaad isku dayi kartaa adeegyada daruur inay ka Mac wareejiyo music inay iPhone. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah adeegyada daruur caan ah in aad si fiican aad u gelin doonaa in ay ku raaxeystaan ​​music.
# 1. Google Play Music . Ha iga qaldan qaataan. Ma waxaan aad qanciso in cayayaanka music ka, laakiin isku dayaya inuu ku yidhaahdo uun bixisaa adeegga si aad u geliyaan ilaa 20000 heeso ka Mac in daruurtii lacag la'aan. Waxaad ku rakiban kartaa Music Player aad Mac inay geliyaan heeso hore. Markaas rakibi Google Music macmiilka - eeg on your iPhone inuu u ciyaaro, kuwaas oo heeso uploaded lacag la'aan ah.
# 2. WordPress . WordPress waa sida weel daruurta u ogolaanaya inaad wax kasta oo ay si, dabcan, oo ay ku jiraan heeso. Dhammaan waxa aad u baahan tahay in la soo dajiyo WordPress on Mac iyo DropBox u iPhone. Samee xisaab iyo heeso ka Mac u weelka. Later, u hagaagsan WordPress oo wuxuu ku raaxaysan music si xor ah aad iPhone.
# 3. Vox . Si aad u noqoto qof daacad ah, Vox hawlaha sida ciyaaryahan warbaahinta ah, laakiin waxa ay kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan music ka Mac si iPhone via AirPlay ah. Oo waxaa ii dambi dhaaf, waxaan ku leeyahay, runtii waa codsi cajiib ah music si ay u sahamiyaan idaacadaha online. Oo waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa inuu u ciyaaro music soo xulay Lugood Library.
Qaybta 6. Su'aalo iyo Jawaabo u beddelashada Music dhexeeya iPhone iyo Mac
Su'aasha # 1: Waxaan iibsaday Macbook ah oo aad rabto in aad ogaato haddii aan kala soo bixi ii music ka iPhone 4s aan si aan MacBook, waxaa tirtiri doonaa heesaha oo dhan aan iPhone oo lagu hees oo mid waxaan u leeyihiin on MacBook ee la casriyeeyay, tan iyo markii aan intaas kudarayaan iPhone 't synced la MacBook this?
Jawaab: Marka hore, waxaan idinku leeyahay ay tahay in aanad ka soo dejisan kartaa music ka 4s iPhone aad si aad macbook haddii aadan awood u your computer la ID Apple ee aad loo isticmaalo si ay u iibsadaan heeso aad iPhone in Lugood. Markaas gab u hagaagsan auto ee Lugood rabitaanadayda qalabka. Later, kala iibsiga songs iibsaday ka iPhone in aad MacBook. Si aad u wareejin Lugood non iibsaday songs, tixraac -how si ay u gudbiyaan heesaha oo dhan ka iPhone si Mac. Oo Hubi in, haddii aad kaliya ku wareejin songs iibsaday ka iPhone si Mac aan syncing, heeso aad iPhone ma laga tirtirayaa.
Su'aasha # 2: Waxaan haystaa laba Mac, iMac ah iyo MacBook. Kaliya ma ogaan karo my iPhone synced labada laba Mac ah. Waxa ay masixi aan iPhone. Ma jiraa hab kasta oo ii heeso daro si iPhone ka mid ka mid ah Mac oo aan Lugood?
Jawaab: Tani waa sida iPhone waxaa loogu tala galay. Si heeso ka Mac wareejiyo iPhone via Lugood, waa in aad is barbar aad iPhone la Mac ah. Haddii aad rabto in aad heeso daro si iPhone on Mac aan Lugood, bartaan sida loo soo dhoofsadaan heeso ka Mac si iPhone aan Lugood.
Su'aasha # 3: music All aan laga iibsaday gal aan iPhone, ma ahan in aan computer asal ah .... Ma jiraan qaar ka mid ah habka i nuqul karaa my iPhone ama aan ka soo bixi music oo dhan mar kale dhex MacBook sida telefoonka iyo MacBook ayaa u isticmaalaya adeegga isla iCloud.
Jawaab: Wixii xaaladan, users uma baahna inay muusikada oo dhan mar kale dhex MacBook laakiin kala iibsiga songs iibsaday ka iPhone si Mac via Lugood.
Su'aasha # 4: Sidee ayaan u hagaagsan aan iPhone in computer cusub oo aan haysan si ay u masixi oo u hagaagsan? Waxaan leeyahay 4s iPhone oo aan loo isticmaalaa in lagu hagaagsan oo aan computer daaqadaha jir. Waxaan hadda leeyihiin hawada macbook ah oo iska cad waxaan doonayaa inuu ku soo bilowdo syncing aan iPhone on my Mac halkii PC Windows ah. Waxaan rabaa in aan u isticmaali Mac Lugood u syncing iyo gelinaya music ka Mac si iPhone, laakiin ma doonayo in aan furo mid ka mid ah music ah.
Jawaab: Halkan waxa ku jira laba xal: syncing music ka Lugood Mac si iPhone iyo tirtiro xogta asalka ah ama wareejinta music ka Mac si iPhone aan Lugood. Taasi jawaab fudud.
Bedelka Video ka iPhone si Mac
Nuqul Xiriirada ka iPhone si Mac
Nidaameed iPhone si Mac
Playlist ka iPhone wareejiyo Lugood
IPhone kaabta si Mac leh / aan Lugood
Jailbreak iPhone la Evasi0n 7
Sida loo Copy VCF Faylal ay si iPhone
> Resource > Mac > Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Mac si iPhone & ka iPhone si Mac